छालालाई सुक्खापन हुनबाट यसरी जोगाउन सकिन्छ | Ratopati
personमाया श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर २७, २०७७ chat_bubble_outline0
जाडोयाम सुरु भएको छ । जाडोयाममा सबैले भोग्ने थुप्रै समस्यामध्येको एउटा प्रमुख समस्या छालामा हुने सुक्खापन पनि हो । यो मौसममा चिसो हावा चल्ने भएकाले छालामा सुक्खापन आउनुका साथै विभिन्न समस्या देखा पर्छन् । जाडो मौसममा छाला सुक्खा हुँदा चह¥याउने, चिलाउने, पोल्ने, फुट्ने, औँलाहरु रातो भएर सुन्निने र घाउ हुनेजस्ता समस्याले प्रायःजसो मानिसलाई सताएकै हुन्छ ।
नियमित औषधि सेवन गर्नेको छालामा बढी सुक्खापन आउने बीर अस्पतालकी छाला रोग विशेषज्ञ डा. लैला लामा बताउँछिन् । सुगर, ब्लड प्रेसर, किड्नीको औषधि प्रयोग गर्नेको छालामा सुक्खापना बढी देखिने उनको भनाइ छ ।
जाडो मौसममा हामीले सामान्य कुराहरुको ख्याल नगर्दा छालामा सुक्खापनका आउनुका साथै अनेक समस्या देखा पर्छ । त्यसैले जाडोमा छालाको स्याहारमा ध्यान दिनुपर्ने डा.लामा बताउँछिन् ।
जाडो याममा छालामा सुक्खापन देखिने कारणहरु :
डा. लामाले जाडो याममा छालामा विभिन्न कारणले सुक्खापन देखिने बताइन् ।
—जुन पायो त्यही साबुनको प्रयोग गर्दा
—बजारमा पाइने जुन पायो त्यही मोस्चराइजर क्रिम प्रयोग गर्दा ।
चिसो याममा छालामा देखापर्ने समस्याबाट यसरी जोगिन सकिन्छ :
डा. लामाले चिसो याममा छालामा देखापर्ने समस्याबाट जोगिनका लागि केही उपायहरु सुझाएकी छन् ।
— जाडोमा उनबाट बनेको बाक्लो लुगा लगाउँदा शरीर सुक्खा भएर चह-याउँछ । त्यसले शरीर चिलाउने हुँदा सुतीको पातलो लुगा लगाएरमात्र बाहिरबाट उनीको लुगा लगाउनु उचित हुन्छ । यसले छालामा सुक्खापन आउन दिँदैन ।
—जाडोमा सामान्य छाला पनि खस्रो हुने भएकाले छाला सुक्खा हुन नदिनका लागि नियमित रुपमा मोइस्चराइजर क्रिमको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
—चिसोले छाला सुक्खा हुँदा कत्ला निस्कने गर्छ । छालाबाट कत्ला निस्किएको अवस्थामा चिल्लो पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ । यदि चिल्लो पदार्थको प्रयोग गर्दा पनि समस्या कम भएन भने छाला रोग विशेषज्ञसमक्ष देखाउनुपर्छ ।
—जुनपायो त्यही साबुनले नुहाउँदा छालामा धेरै सुक्खापन आउन सक्छ । त्यसैले जाडो र गर्मी मौसममा नुहाउँदा प्रयोग गरिने साबुन फरक फरक हुनुपर्छ । जाडोमा नुहाउँदा कसैलाई ग्लिसिरिनयुक्त साबुनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने कसैलाई मोस्चराइजर साबुन प्रयोग गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ लगायत देशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बस्ने प्रायःजसो मानिसमा हात, खुट्टाका औँला रातो भएर सुन्निने समस्याले सताउने गर्छ । डा. लामाका अनुसार यस्तो अवस्थामा निम्न उपायहरु अपनाउनुपर्छ :
—पानी खेलाउनुभन्दा अगाडि रबरको पञ्जा लगाएर काम गरेको खण्डमा औँला सुनिदैन ।
—औँलाहरुलाई रातो भएर सुनिन नदिनका लागि ‘हट वाटर ब्याग’ले औँला सेक्नुपर्छ ।
—जाडोमा जुत्ता लगाउँदा पातलो सोल भएको लगाउन हुँदैन । ‘स्पोर्टस्’ जुत्ता लगाउनु पर्छ ।
—हातखुट्टामा न्यानो पञ्जा तथा मोजा लगाउनु पर्छ ।
—छाला सुक्खा हुन नदिनका लागि नरिवलको तेल निकै लाभदायी मानिन्छ भने मह, जैतुनको तेल, दूधको क्रिम र एलोभेरा जस्ता घरायसी चिजलाई मोइस्चराइजरको रुपमा छालामा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।